Iyo yeruzhinji beta yeIOS 16 inogona kunonoka nekuda kwematambudziko ekugadzikana | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 18/05/2022 12:00 | iOS 16, Noticias
La WWDC yave pedyo nekona uye ichange iri pakuvhura chirevo apo Tim Cook nechikwata chake vacharatidza maitiro matsva ekushanda. Pakati pavo pane iOS 16 uye iPadOS 16, iyo sezviri pachena isingauye neyakakura dhizaini shanduko, asi iine maficha matsva anovandudza kupindirana kwehurongwa nemushandisi. Nekudaro, chimwe chinhu chiri kuitika muCupertino. Ruzivo rwazvino runonongedza Kugadzikana nyaya mu iOS 16 betas. Izvi zvingakonzeresa kunonoka kuburitswa kweruzhinji beta Izvozvo zvinogona kunonoka mavhiki mashoma.
Matambudziko ekugadzikana aizononoka kuvhurwa kwekutanga veruzhinji beta yeIOS 16
Iyo giya yemabheta eApple's masisitimu anoshanda anopfuura girizi. Kwemakore, Apple inoburitsa mabeta ekutanga evagadziri pakupera kwekuvhura keynote yeWWDC. Panguva iyoyo, vashandisi chete vane kunyorera kuApple Developer Chirongwa vanogona kuisa iwo mabheta pamidziyo yavo. Masvondo gare gare, nekutangwa kwechipiri beta yevagadziri, Apple inovhura Public Beta Chirongwa, ichitanga vhezheni yayo yekutanga. Ichi chirongwa chinogona kuwanikwa chero mushandisi ane mudziyo unoenderana.
Zvisinei, neIOS 16 zvinoita sekunge mazuva ari kuzochinja. Ruzivo rwazvino kubva gurman kunongedzera kune chii iOS 16 haina kugadzikana sezvaizodiwa neApple. Iyo yazvino inovaka yekutanga beta yevagadziri haina kugadzikana zvachose uye izvo zvinoreva izvo public betas inononoka kuburitswa kwayo. Izvi zvinodaro nekuti Apple haidi kumhanyisa njodzi yekutangisa mavhezheni makuru nenzira yeruzhinji betas nekuti zvaizoreva kuparadzira sisitimu yekushandisa yemhando yakaderera pane yaidiwa.
iOS 16 yekutanga yeruzhinji beta yakarongwa padivi peIOS 16 mugadziri webeta 3 muna Chikunguru. Kutanga iOS public betas inowanzo buritswa pamwe nebeta 2. Izvi zvinoreva kuti iyo public beta inogona kunge ichimhanya kumashure. Mbeu dzemukati dzazvino dzinenge dziine buggy. Zvinhu zviri kufamba uye zvinogona kuchinja.
- Mark Gurman (@markgurman) Dai 16, 2022
Mazuva anoratidza anoisa yekutanga beta yevagadziri musi waChikumi 6, yechipiri mavhiki maviri gare gare uye yechitatu muna Chikunguru. Iri mune iyi yechitatu beta yevagadziri apo Apple yaizofunga kuvhura vhezheni yayo yekutanga yePublic Beta Chirongwa. Musiyano ndewekuti pane dzimwe nguva Apple inovhura yayo yeruzhinji beta chirongwa mune yechipiri beta yevagadziri.
Tichaona kana avo vanobva kuCupertino vachizokwanisa kuwana vhezheni yakagadzikana kuti vadzore zvekare karenda kana, pane zvinopesana, isu tine nhau nezve iOS 16 betas.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 16 » iOS 16 public betas inogona kunonoka nekuda kwekugadzikana nyaya
New Sonos Sub Mini Leaks, Sonos 'Inotevera Budget Subwoofer